हरियो aventurine क्रिस्टल पत्थर अर्थ। पारदर्शी क्वार्ट्जको एक रूप
ट्याग एभेन्टुरिन, हरियो aventurine
हरियो aventurine क्रिस्टल पत्थर अर्थ।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक aventurine किन्नुहोस्
क्वार्ट्जको एक रूप, यसको translucency र प्लाटी खनिज समावेशीकरण को एक विशेषता जो एक चम्किरहेको वा चकाचौंध प्रभाव दिने उद्यम भनिन्छ।
सब भन्दा सामान्य र color हरियो हो, तर यो सुन्तला, खैरो, पहेंलो, निलो, वा खैरो पनि हुन सक्छ। क्रोम-बेयरिंग फूसाइट (विभिन्न प्रकारका मस्कुभेट मीका) क्लासिक समावेशीकरण हो र यसले सिल्भरी हरियो वा निलो चमक दिन्छ। सुन्तला र खैरो हेमाटाइट वा गोथाइटका विशेषता हुन्।
किनकि यो चट्टान हो, यसको भौतिक गुणहरू फरक हुन्छन्: यसको विशिष्ट गुरुत्व २.2.64-२.2.69 between बीचमा पर्न सक्छ र यसको कठोरता एकल क्रिस्टल क्वार्ट्ज भन्दा somewhat..6.5 जति कम छ।
Aventurine Feldspar वा सूर्य पत्थर सुन्तला र रातो aventurine क्वार्टजाइट संग भ्रमित गर्न सकिन्छ, जबकि पूर्व सामान्यतया एक उच्च पारदर्शिता को हो। चट्टानलाई प्राय: ब्यान्ड गरिएको हुन्छ र फ्यूसाइटको अत्यधिक मात्राले यसलाई अस्पष्ट पार्दछ, जहाँ यस्तो अवस्थामा मालाचीटलाई पहिलो नजरमा गलत हुन सक्छ।
Aventurine नाम इटालियन "a ventura" बाट आएको हो जसको अर्थ हो "संयोगले।" यो १vent औं शताब्दीको कुनै बेला एभेन्टुरिन ग्लास वा गोल्डस्टोनको भाग्यशाली खोजको लागि संकेत हो। एउटा कथाले देखाउँदछ कि यस प्रकारको गिलास मूलतः एक कामदारले मुरानोमा दुर्घटनामा बनाएका थिए, जसले केही तामाको फाइलि .्गलाई पग्लेको "धातु" मा झर्न दिए, जहाँबाट उत्पादनलाई एभेन्टुरिनो भनिन्थ्यो। मुरानो गिलासबाट नाम खनिजमा पारित भयो, जसले एक समान मिल्दो देखायो। यद्यपि यो पहिले ज्ञात थियो, गोल्डस्टोन अब एभेन्टुरिन र सनस्टोनको सामान्य नक्कल हो। गोल्डस्टोनलाई पछिल्लो दुई खनिजहरूबाट यसको तांबेको मोटा फ्लाक्सले देख्न सकिन्छ र यसलाई अस्वाभाविक रूपमा एक समान ढंगले गिलास भित्र फैलाउँछ। यो सामान्यतया सुनौलो खैरो हुन्छ, तर निलो वा हरियोमा पनि पाउन सकिन्छ।
अधिकांश हरी र निलो-हरियो रफ भारतको उत्पत्ति हुन्छ, विशेष गरी मैसूर र चेन्नईको वरिपरिको क्षेत्रमा, जहाँ यो प्रशस्त कारीगरहरूले प्रयोग गर्दछ। क्रीमी सेतो, खैरो र सुन्तला रंग चिली, स्पेन र रसियामा पाइन्छ। अधिकांश सामग्रीहरू मोती र मूर्तिहरूमा कुँदिएका हुन्छन् केवल क्याबचन्समा बनाइएका उत्कृष्ट उदाहरणहरू पछि गहनाहरूमा राखिन्छन्।
Aventurine क्रिस्टल अर्थ र उपचार गुण लाभ
हरियो एभेन्चुरिन पत्थर अर्थ समृद्धिको एक ढु stone्गा हो। यसले नेतृत्व गुणहरू र निर्णायकपनलाई अझ सुदृढ बनाउँछ। सहानुभूति र समानुभूतिलाई बढावा दिन्छ। लगनशीलतालाई प्रोत्साहन दिन्छ। ढु stone्गाले स्ट्यामर र गम्भीर न्यूरोसलाई राहत दिन्छ। यसले कसैको दिमागलाई स्थिर गर्दछ, अनुभूतिलाई उत्तेजित गर्दछ र रचनात्मकता बढाउँछ। विकल्प र सम्भावना हेर्नका लागि सहयोग। क्रोध र उत्तेजना शान्त पार्छ। कल्याणको भावनाहरु लाई बढावा दिन्छ। क्रिस्टलले पुरुष-महिला उर्जालाई सन्तुलनमा राख्छ। यसले मुटुको उत्थानलाई प्रोत्साहित गर्दछ। वातावरणीय प्रदूषण बिरूद्ध सुरक्षा गर्दछ।
माइक्रोस्कोप मुनि Aventurine
एभेन्टुरिन केको लागि राम्रो हो?
यसले रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्छ र मेटाबोलिजमलाई उत्तेजित गर्दछ, कोलेस्ट्रोल कम गर्दछ। क्रिस्टल को एक विरोधी भड़काउने प्रभाव छ र छाला eruptions, एलर्जी, माइग्रेन, र आँखा सुख दिन्छ। यसले फोक्सो, साइनस, मुटु, मांसपेशी र urogenital प्रणालीहरू निको पार्दछ।
हरियो एभेन्टुरिनको आध्यात्मिक अर्थ के हो?
हरियो एभेन्चुरिन पत्थर अर्थ पुरानो बान्की, बानी र निराशहरु रिलीज गर्दछ ताकि नयाँ विकास हुन सक्दछ। यसले आशावाद र जीवनको लागि उत्साह दिन्छ, एक व्यक्तिलाई विश्वासको साथ अगाडि बढ्न र परिवर्तनलाई अँगाल्न अनुमति दिँदछ। यसले कसैको सृजनात्मकता र प्रेरणालाई बढाउँछ, र जीवनका अवरोधहरू पैतृक गर्न दृढतालाई प्रोत्साहन गर्दछ।
तपाई एभेन्टुरिन ढु stone्गा कहाँ राख्नुहुन्छ?
पूर्व वा दक्षिण कोठामा कोठा वा घरको प्रशस्तता, जीवनशक्ति र स्वस्थ विकासको लागि हरी एभेन्टुरिन चट्टान राख्नुहोस्। बच्चाको कोठा, भोजन कक्ष, भान्छाघर वा नयाँ परियोजना सुरु हुने क्षेत्र ढु the्गाको साथ सुधार गर्न सकिन्छ।
Aventurine के प्रतीक हो?
Aventurine क्रिस्टल अर्थ। समृद्धि, सफलता, प्रशस्तता, र शुभकामनाको लागि ढु stone्गाका रूपमा चिनिन्छ, यो क्रिस्टलको एक टुक्रा तपाईंको खल्तीमा, वालेटमा, वा तपाईंको वेदीमा लिएर तपाईंको भाग्य राम्रो हुनेछ। क्रिस्टलको सब भन्दा सामान्य रूप हरियो हो, जुन पहेंलो देखि गाढा हरियो सम्म रहेको छ, र जब यो पॉलिश हुन्छ, यसलाई सजीलो हरियो जेडको साथ भ्रमित गर्न सकिन्छ।
के तपाईं हरियो हरिनरी लगाउन सक्नुहुन्छ?
हरियो एभेन्चुरिन हृदय स्वास्थ्य र उपचार, जीवन शक्ति, र प्रशस्तताको एक प्रतिरक्षा बढाउने ढु stone्गा हो। हृदय चक्र सन्तुलन गर्न मद्दत गर्न यसलाई दिनदिनै लगाउनुहोस्।
कुन चक्र हरियो एभेन्टुरिन हो?
हृदय चक्र संग जोडिएको, हरियो aventurine भावनात्मक अवरोध र नकारात्मक सोच ढाँचा जारी गरेर हृदयलाई निको पार्छ र प्रेममा भरोसा गर्ने हाम्रो क्षमतालाई अवरोध बाट रोक्छ प्रेमले हाम्रो मन खोल्छ।
तपाईं aventurine कसरी लगाउनुहुन्छ?
तपाईको मुटुको नजिक हरियो आवेन्चरिन लगाउन सिफारिस गरिन्छ, वा नाडी पोइन्टहरूमा। निलो एभेन्टुरिन तेस्रो-नेत्र चक्रमा उपचार गर्न सहायताको लागि राख्नुपर्दछ, वा तपाइँ सुत्नहुँदा तपाईंको तकिया मुनि।
के तपाईं पानीमा aventurine राख्न सक्नुहुन्छ?
कडा क्रिस्टलको रूपमा यो पानीमा सुरक्षित छ। जस्तो रक क्रिस्टल क्वार्ट्ज, नीलम, धुलो क्वार्ट्ज, गुलाब क्वार्ट्ज, सिट्रीन, हिउँ क्वार्ट्ज, agate, वा ज्यास्पर
हरियो एभेन्टुरिनले के आकर्षित गर्दछ?
यो भाग्य, प्रशस्तता र सफलता आकर्षित गर्न को लागी एक प्रमुख ढु stones्गा हो। ढु The्गाको पछाडि विशेष सुखदायक उर्जा हुन्छ, र समाधान नगरिएका भावनात्मक मुद्दाहरूको माध्यमबाट काम गर्न सिफारिस गरिन्छ।
कुन दिन मैले हरियो एभेन्टुरिन लगाउनु पर्छ?
समग्र सफलताको लागि जो कोहीले पनि हरियो एभेन्टुरिन ब्रेसलेट लगाउन सक्छ। यसले व्यक्तिलाई कुंडलीमा कमजोर बुध रहेको राम्रो परिणाम प्रदान गर्दछ। कुनै पनि महिनाको 5th, १ 14 र २rd तारिखमा जन्मने व्यक्तिहरूले यसलाई लगाउनु पर्छ।
तपाइँ कसरी हरियो aventurine को ख्याल गर्नुहुन्छ?
क्रिस्टल सूर्यको लामो एक्स्पोजरसँग फीका हुन सक्छ, त्यसैले रत्नहरू अध्यारो ठाउँमा भण्डार गर्नुहोस्। यसले चरम तापक्रममा पनि प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यसैले यस रत्नलाई गर्मी वा जाडोमा तपाईंको कारको ड्यासबाट टाढा राख्नुहोस्। यो रत्नलाई न्यानो साबुन पानी र सफा कपडा वा ब्रशमा सफा गर्नुहोस्।
हाम्रो रत्न पसलमा प्राकृतिक aventurine किन्नुहोस्
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्टहरू ... को रूपमा हामी अनुकूलन बनाइएको हरियो एभेन्टुरिन गहनाहरू बनाउँछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।
ट्याग एभेन्टुरिन, ग्लास, सुनको पत्थर
निलो सुनको पत्थर
ट्याग एभेन्टुरिन, स्फतीय, sunstone